म जनता सँगसँगै सधै छु, मेरो जित्ने आधार यही हो : रमेश श्रेष्ठ - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ म जनता सँगसँगै सधै छु, मेरो जित्ने आधार यही हो : रमेश श्रेष्ठ
म जनता सँगसँगै सधै छु, मेरो जित्ने आधार यही हो : रमेश श्रेष्ठ
सिन्धु खबर मंगलबार, २०७९ वैशाख २७ / २०:००
बलेफि । बलेफि गाउँपालिका ८ मा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश श्रेष्ठले उमेदवारी दिएका छन् । उनले यसअघिको २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका थिए ।
त्यतिबेला उनी नेकपा एमालेका चरीबहादुर तामाङसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए । उनले आफू पराजित भएपनि जनताको काममा कहिल्यै नाइ भनेनन् । बाढी पहिरो होस् या कोरोना उनी सधै जनताको घरदैलोमा पुगिरहे । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री लिएर उनी जन जनकोमा पुगे ।
निरन्तर कांग्रेसका हरेक कार्यक्रममा क्रियाशील भएर सरिक भए । सानो उमेरमै उनले राजनीतिक चेतनाको विकास गरे र जनताको सेवामा अहोरात्र खटिरहे । अहिले उनी पुन वडा नम्बर ८ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार भएका छन् । सिन्धु खबरले उनी सँग गरेको कुराकानी
फेरि उम्मेदवारी दिनुभएछ नि ?
गत स्थानीय चुनावमा म थोरै मतले पराजित भए । जनताको सेवा गर्ने मेरो सपना अधुरै रह्यो । म एक्लोले थोरै गर्न सक्दोरहेछु । त्यसको लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको आवश्यक पर्छ । म एक्लैसँग मन हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त स्रोत साधन हुन सकेन । त्यसैले जनताबाट निर्वाचित भएर जनताकै सेवामा समर्पित हुन चाहान्छु ।
यसअघि २०७४ मा एमालेले जिते तर जनताका आवश्यकता आज पनि ज्युँ का त्युँ छन् । नागरिक कोरोना कालमा ग्रस्त भइराख्दा हाम्रो निर्वाचित वडाध्यक्ष कता हराउनु भयो थाहा छैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई, विउविजन, सडक, बाटोघाटो लगायत जनताका आवश्यकता र चाहनामा उहाँ मौन रहनुभयो । निर्वाचित त हुनुभयो तर जनताको आवश्यकतामा उहाँको ध्यान दिनुभएन । म पराजित भएदेखि पनि जनता सँगसँगै छु । त्यही नै मेरो जितको आधार हो ।
निर्वाचित हुनु भए के गर्नुहुन्छ ?
म निर्वाचित भए पनि नभएपनि जनतासँगै हुनेछु । मैले निर्वाचित भए जनताको अति आवश्यक कुराहरुमा ध्यान दिनेछु । किसानलाई विउ विजन र मलको व्यवस्था गर्नेछु । किसानलाई खेतीपातीका लागि सिचाईको व्यवस्था गर्नेछु । व्यवसायिक कृषि गर्नेलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नेछु । उत्पादित सामग्ीलाई वडाले नै खरिद गर्नेछ । किसानले बिmत्रीक लागि भौतारिनु परेन ।
वडाका सबै क्षेत्रलाई सडकमार्गले जोड्नेछु । वडाका स्थानीयलाई अर्थोउपार्जन हुने किसिमका योजनाहरु ल्याउनेछु । स्वास्थ्यको पहुँचमा सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नीति बनाएर लागु गर्नेछु । वडामा भएका विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनेछु । बाल बच्चाहरुलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनेछु ।